चस्मा लगाउने बेक्तीलाई कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना कम! - Mitho Khabar
September 21, 2020 mithokhabarLeaveaComment on चस्मा लगाउने बेक्तीलाई कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना कम!
अध्येताहरूले कोरोना सं’क्रमण भएर अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूको तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए। यही क्रममा उनीहरूले यो अनौठो प्रवृत्ति फेला पारेका हुन्। उनीहरूले अध्ययन गरेका बिरामीमध्ये नियमित रूपमा चस्मा लगाउनेहरू थोरै मात्र थिए।
जबकि यसअघिको अर्को अध्ययनले त्यही भेगमा यही उमेर समूहका मानिसमा आँखाको यो कमजोरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा फेला परेको थियो। यति धेरै जनसंख्याले चस्मा लगाउने भए पनि कोरोना सं’क्रमितमध्ये चस्मा लगाउनेहरू त निकै कम छन्।
यसले वैज्ञानिकहरूमा एउटा आशंका भयोः कतै चस्मा लगाएका कारण पनि मानिसहरू सं’क्रमित हुनबाट जोगिएका त होइनन्?
यसबारे अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्नु भने हतारो हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। मानिसहरूलाई जो’खिमबाट बचाउन मास्कसहित चस्मा पनि लगाउनु भनेर सुझाव दिन अहिले नै पर्याप्त आधार नभेटिइसकेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
हुनसक्छ, चस्माले केही हदसम्म सं’क्रमण छेक्ने काम गर्ला! चस्मा लाएका बेला अगाडि बसेका मानिसले हाँछ्यु गर्दा वा खोक्दा छिटाहरू आँखामा पर्नबाट रोक्ला। वा अर्को कारण, चस्मा लगाइरहेका मानिसले अरूलेजस्तो घरिघरि हातले आँखा मिचिरहने सम्भावना पनि कमै होला। यसले हातमा भाइरस भए अनुहारसम्म पुग्न कम हुन सक्ला।
अहिलेको यो अध्ययन भने ‘जामा अप्थाल्मालोजी’ ले प्रकाशन गरेको हो। यसमा जोन हपकिन्स स्कुल अफ मेडिसिनकी सं’क्रामक रोग विशेषज्ञ तथा मेडिसिनका एसोसिएट प्राध्यापक डा. लिसा मारागाकिसको संलग्नता थियो। उनले यो अध्ययनको नतिजा परिभाषित गर्ने बेलामा सावधानी अपनाउन अनुरोध पनि गरेकी थिइन्।
यो अध्ययन तीन सयभन्दा कम सं’क्रमितमा भएकाले यसलाई सानो अध्ययन भनिन्छ। अहिले संसारभर करिब तीन करोडमा फैलिसकेको कोरोनाका अगाडि यो धेरै सानो मात्रा हो। त्यसबाहेक नजिकका दृश्य मात्र स्पष्ट देख्नेको जुन तथ्यांक र अध्ययनका आधारसँग तुलना गरिएको छ, त्यो तथ्यांक झन्डै एक दशक पुरानो हो। त्यसैले पनि यसलाई बलियो दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्न मु’श्किल भएको छ।
डा. मारागाकिसका अनुसार पछि यो कुराको कुनै तुक नहुन पनि सक्छ। अरू नै कारणले चस्मा लगाउनेहरू सं’क्रमित नभएका हुन पनि सक्छन्।
उदाहरणका निम्ति चस्मा लगाउने बढीजसो स्वाभाविक रूपले अलि बुढेसकाल लागेका हुन सक्छन्। महामा’री फैलिएको छ भन्ने सुनेपछि बढी सावधानी अपनाउँदै धेरै घरैमा बसेका हुन सक्छन्। र सं’क्रमणबाट जोगिएका होलान्!
बरू चस्मा लगाउनाले थप जो’खिमका सम्भावना पनि देखिन्छ। जस्तो, कसैले चस्मा लगाएपछि अरू बेलाभन्दा झन् बढी अनुहारमा हात लगिरहने खतरा हुने डा. मारागाकिस बताउँछिन्।
‘हो चस्मा लगाउँदा कसैलाई कुनै हा’नी हुँदैन। तर के सबैले त्यसलाई लगाउनै पर्ने जरुरी छ? सायद छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आँखा जोगाउन चस्मा वा फेस सिल्ड लगाउने आह्वान गर्नुअघि यसको व्यवहारिक पक्ष हेर्न जरुरी छ। कुनै कुनै पेसामा आवद्ध विशेषगरी बच्चा–बुढाबुढी वा बिरामी हेरचाह गर्नेले चाहिँ यो सुरक्षा उपाय अवलम्वन गर्दा राम्रै हुन्छ।’
अनुहारमा हुने लस्सेदार झिल्लीका कारण आँखा, नाक र मुखबाट भा’इरस वा अन्य वि’कार शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छन् भन्ने तथ्य निकैअघि प्रमाणित हो। तर, कोरोना भा’इरसका मामिलामा भने सं’क्रमणका निम्ति नाक नै सबभन्दा अनुकूल विन्दु देखिएको छ।
यद्यपी चिकित्सकहरूले थोरै यस्ता बिरामी पनि देखिरहेका छन् जसका आँखामा संकेत भेटिन्छ। कोरोनाका कतिपय बिरामीका आँखा राता भएका पाइएका छन् जसले शरीरमा भाइरस सं’क्रमण आँखाबाटै भइरहेको संकेत गर्छ।
त्यसो त आमरूपमा देखिएको खोकी वा ज्वरोका तुलनामा आँखाले देखाउने लक्षण असाध्यै कम छ। तै पनि कतिपय अध्ययनले ती लक्षणकै आधारमा आँखाबाटै सं’क्रमण भएको हुनसक्ने औंल्याएका छन्।
June 21, 2021 Nirmal Gautam